Shirka ASEAN: Badda Koofurta Shiinaha, cudurka faafa ee coronavirus ayaa hoos u dhigay
September 9, 2020 3 min read By wardeeq news Reporter
Diblumaasiyiinta ugu sareysa Koonfur-bari Aasiya ayaa qabanaya wadahadaladoodii sanadlaha ahaa si ay uga wada hadlaan cudurka faafa ee coronavirus iyo xiisadaha sii kordhaya ee Koonfurta Shiinaha iyadoo ay sii kordhayaan loolanka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha.
Shirka 10-da dal ee Ururka Aasiya Koonfur-Bari Aasiya (ASEAN) wuxuu ku bilaabmay xiriiriyaha fiidiyowga Arbacadii ka dib markii uu dib u dhacay muddo bil ah masiibada.
Wasiirada Arimaha Dibada ee Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand iyo Vietnam ayaa sidoo kale lagu wadaa inay la kulmaan dhigooda Aasiya iyo Reer Galbeedka kulanka.
Ruushka, Japan, Australia, Kuuriyada Koofureed iyo Hindiya ayaa ka mid ah kuwa si fog uga mid noqonaya munaasabadda ay martigelisay Vietnam oo ay sidoo kale ku jiri doonaan gole amniga ka socda oo ay ka kooban yihiin 27 dal
In kasta oo Cudurka faafa ee COVID-19 uu kusii siqayo qaab cakiran, dadkeenna iyo ganacsatadana ay sii ballaadhinayaan saamaynta ay yeelanayso, haddana juqraafi-siyaasadeedka iyo juqraafiga gobolka, oo ay ku jiraan Badda Koonfurta Shiinaha, ayaa markhaati ka noqonaya xasillooni sii kordheysa oo nabadda qatar gelinaysa. iyo xasilloonida, “Raiisul Wasaaraha Vietnam Nguyen Xuan Phuc ayaa ku yiri khudbadiisa furitaanka.
Khudbadiisa ayaa timid xilli Shiinaha, Mareykanka, iyo dhowr wadan oo ku yaal Koonfur-bari Aasiya ay weli ku dhexjiraan xiisad kacsan oo ku saabsan falalka ka socda Koonfurta Shiinaha.
Muranka Badda Koofurta Shiinaha
Arrinta qodxanta dheer ee ajandaha ka ah ayaa ah murannada dhuleed ee Koonfurta Shiinaha oo ay ku lug leeyihiin Shiinaha, Taiwan iyo ASEAN xubnaha Brunei, Malaysia, Filibiin iyo Vietnam.
Beijing waxay sheeganeysaa ku dhowaad dhammaan Badda Koonfurta Shiinaha inay tahay dhulkeeda waxayna ku sameysay dhoolatusyo dab-damis ah marin biyoodka bilihii la soo dhaafay.
Mareykanku wuxuu kaga jawaabey dirista maraakiib dagaal iyo diyaarado milatari oo duulaya dhoolatuska ciidamada badda ee Shiinaha.
Bishii Luulyo, Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo wuxuu caddeeyay in Washington ay tixgelineyso dhammaan sheegashooyinka badda ee Shiinaha ee muranka ka taagan gobolka xeebta ee ka baxsan biyaheeda caalamiga ah ee la aqoonsan yahay inay yihiin sharci darro.
Maamulka Trump wuxuu si wax ku ool ah ula saftay afarta waddan ee sheeganaya ASEAN, oo ay weheliso Indonesia, kuwaas oo dhammaantood ka soo horjeeday sheegashada Shiinaha ee gebi ahaanba marin biyoodka.
Shiinaha ayaa markaa ku eedeeyay Mareykanka inuu khilaaf ku beerayo gobolka istiraatiijiga ah. Bishii la soo dhaafay, militarigeeda ayaa la sheegay in ay tijaabiyeen laba gantaal badda Koofurta Shiinaha inta lagu gudajiray dhoolatus.
Shiinaha ayaa riixday in dib loo bilaabo wadahadaladii uu kula jiray ASEAN ee ku saabsan xeerka anshaxa ee looga gol leeyahay in looga hortago iska hor imaadyada hubeysan ee ka dhaca biyaha lagu muransan yahay.
Pompeo iyo dhigiisa Shiinaha, Wang Yi, ayaa xaqiijiyay imaatinkooda Shirka ASEAN, oo sidoo kale lagu sameyn doono muuqaal.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka boodi doona madasha, laakiin wakiilkeeda ASEAN ayaa ka qeyb galaya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibedda ee Vietnam.
Doorashooyinka Mareykanka ayaa si toos ah u cusbooneysiiya: Musiibo lacageed oo la soo sheegay ololihii Trump